အက်ဒဝါ့ကန် - ဝီကီပီးဒီးယား
0°20′S 29°36′E﻿ / ﻿0.333°S 29.600°E﻿ / -0.333; 29.600ကိုဩဒိနိတ်: 0°20′S 29°36′E﻿ / ﻿0.333°S 29.600°E﻿ / -0.333; 29.600
၁၂,၀၉၆ km2 (၄,၆၇၀ sq mi)
၇၇ km (၄၈ mi)
၂,၃၂၅ km2 (၈၉၈ sq mi)
၁၇ m (၅၆ ft)
၁၁၂ m (၃၆၇ ft)
၃၉.၅ km3 (၉.၅ cu mi)
၉၁၂ m (၂,၉၉၂ ft)
အက်ဒဝါ့ကန် သို့မဟုတ် Lake Rutanzige သည် အာဖရိကကန်ကြီးများထဲတွင် ပါဝင်သည့် သေးငယ်သည့် ကန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကန်သည် ကွန်ဂိုနိုင်ငံနှင့် ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတို့၏ နယ်နိမိတ်ပေါ်၊ အရှေ့အာဖရိကအက်ကွဲကြောင်း၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အီကွေတာ၏ တောင်ဘက် ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာ မြောက်ဘက်ကမ်းနားတွင် တည်ရှိသည်။
Edward Nyanza. The black and dashed lines indicate Stanley's route.
ဤကန်ကို ၁၈၈၈ ခုနှစ်တွင် Emin Pasha Relief လေ့လာရေးအတွင်းတွင် ဟင်နရီမော်တွန်စတန်လေက ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကန်၏ အမည်ကို ဝေးမင်းသား အဲလဘတ်အက်ဒဝါ့၏ အမည်ကို ဂုဏ်ပြုကာ ပေးခဲ့သည်။ ဤမင်းသားသည် ဘုရင်မကြီး ဗစ်တိုးရီးယားနှင့် နောင်တွင် ဘုရင်ဖြစ်လာသည့် အက်ဒဝါ့ဘုရင် (၇) တို့၏ သားဖြစ်သည်။
၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ယူဂန်ဒါနှင့် Zaire (DRC) တို့သည် ကန်၏ အမည်ကို ယူဂန်ဒါအာဏာရှင် Idi Amin ၏ အမည်ကို ယူ၍ Idi Amin ကန်ဟု အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ် ၎င်းပြုတ်ကျပြီးနောက်တွင် မူလအမည်သို့ ပြန်လည်ထားရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဤကန်ရှိရာနေရာသည် ဆီနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာများဖြစ်ပွားရာ အဓိကနေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ SOCO အင်တာနေရှင်နယ်သည် ကန်ရှိရာ Virunga National Park သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကာ ဆီရှာဖွေရန် အခြေချခဲ့ကြသည်။
သို့သော်လည်း ရွာသားများနှင့် အလုပ်သမားများသည် ဆီကုမ္ပဏီအား ထိုဒေသသို့ ဝင်ရောက်လာခြင်းကို တားမြစ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ ရွာသားများနှင့် အလုပ်သမားများသည် ရိုက်နှက်ခံရခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့် နှိပ်စက်ခြင်းများ ခံခဲ့ရသည်။ Virunga ၏ နယ်နိမိတ်လိုင်များကို ပြန်လည်ရေးဆွဲရန် စီစဉ်မှုများနှင့် ကန်ကိုလည်း ဆုံးဖြတ်မှုမှ ဖယ်ချန်ရန်အတွက် စီစဉ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ထိုဥယျာဉ်သည် ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သဖြင့် ကန်နေရာသည်လည်း ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကွန်ဗန်းရှင်းကို သဘာဝကျကျ ဆန့်ကျင်နေပေသည်။
Food and Agriculture Organization of the United Nations Archived 14 March 2008 at the Wayback Machine.
↑ Gettleman၊ Jeffrey။ "Oil Dispute TakesaPage From Congo's Bloody Past" (in en-US)၊ The New York Times၊ 2014-11-15။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အက်ဒဝါ့ကန်&oldid=743914" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၉:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။